ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: အလကားဖြစ်မနေဘူးလား?...
ZOLZOL | 10:15 PM | သိမှတ်ဖွယ်ရာ
ZOLZOL | 10:15 PM |
တခါက ခရီးသွားတစ်ဦးသည် ခရီးပန်းနေရာမှ ရေဆာဆာနှင့် ရေတွင်း
တခုကိုတွေ့လေ၏…ခရီးလည်းပန်း ရေလည်းဆာ ဆိုတော့ အလောတကြီး ရေခပ်ရာ အ်ိတ်ကပ်ထဲမှ အကြွေစေ့ မတ်စေ့ သည် ရုတ်တရက် ရေတွင်းထဲသို့ ပြုတ်ကျသွားသည်…
ထိုခရီးသွားက လူငယ်လေးကို ..သားသားတို့ ..ဦးဦးပိုက်ဆံ
တမတ်အကြွေစေ့ ရေတွင်းထဲ ပြုတ်ကျသွားလို့ ရေထဲ ငုပ်ပေးလို့
ဦးဦးရဲ့ ဒီအကြွေစေ့တမတ်ကို ငုပ်ပေးလို့ရရင် ဦးဦး နှစ်ကျပ်တိတိ
ထိုအခါလူငယ်က ဦးဦးကလည်း အကြွေစေ့က တမတ်ဘဲတန်တယ်
ဦးဦး ငုပ်ခိုင်းလို့ရရင် သားသားတို့ကို နှစ်ကျပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ ဦးဦး
နောက်မှ ဦးဦးရှင်းပြမယ် သားတို့ ဒီတမတ်စေ့ ကိုရအောင်အရင်
ထို့နောက် လူငယ်လေးတွေလည်း ၀ိုင်းငုပ်ပြီးရှာကြရာ
ထိုအခါ ခရီးသွားကလူကြီးက..ခဏက ဦးဦးရှုံးတယ် မရှုံးဘူးဆိုတာ
တကယ်လို့ ဦးဦးပိုက်ဆံ တမတ်စေ့ကို ရေတွင်းထဲမှာဘဲ အရှုံးခံမယ်
ဆိုရင် ဒီငွေကို ဘယ်သူမှ သုံးလို့မရတော့ လူတွေ အားလုံး အတွက် မရှုံးဘူးလား? ….ဒီငွေဟာ ဦးဦးရဲ့ငွေဆိုပေမဲ့ လူတွေအား
နောက် ဦးဦးက ပေးလိုက်တဲ့ ငွေနှစ်ကျပ်ဆိုတာလည်း သားသားတို့
လူတွေအတွက် အကျိုးမရှိဘူးလား? ရှိတယ်တာပေါ့ ဦးဦး
လူငယ်လေးတွေ လည်းအားလုံး သဘောပေါက်သွားကြလေ၏..
- ဒီဥပမာလေးက ကျွန်တော်တို့ကို ဘာသင်ခန်းစာ
- ကနေ့ လူတွေလက်ထဲမှာ ငွေရှိပြီးဘာမှ မလုပ်ရဲ မကိုင်ရဲတဲ့
လူတွေဟာ ငွေသေမနေဘူးလား?..ဒီငွေနဲ့ တခုခုလုပ်တော့
ကိုယ်လည်း အကျိုးအမြတ်ရနိုင်တယ်..အကျိုးအမြတ် မရတာရင်
တောင်မှ အတွေ့အကြုံဆိုတဲ့ သင်ခန်းစာ အမြတ်ရတာပေါ့..
ငွေတွေလည်း လူ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာ လည်ပတ်လို့ရတော့ လူတွေလည်းအကျိုးရှိ…ဒါလဲ.. ဒါနတမျိုးဘဲ မဟုတ်လား?…
- နောက် ကနေ့လူသေတွေရဲ့ အလောင်းထဲကို ငွေတွေထည့်တော့
ငွေအလကား မဖြစ်သွားဘူးလား? ဒီလို ထည့်မည့်အစား
သေသွားတဲ့ လူရဲ့ ကျေးဇူးကို အောင့်မေ့တဲ့ အနေနဲ့
အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ နေရာ တနေရာရာမှာ သုံးရင်ကော ပိုမကောင်းပေဘူးလား?…
- နောက် ဖူးစာဆုံမဆုံ၊ လာဘ်ရကိန်းရှိမရှိ ဖလားခွက်ကြီးထဲမှာ ပစ်ထဲ့မည့်အစား တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ပညာရေး၊ ကျန်းမားရေးတွေမှာ ပေးကမ်းလိုက်ရင် ပိုပြီးအကျိုး မများဘူးလား?..
- နောက် အဆောက်အဦးကြီးကြီးမားမား လုပ်ပြီး
တစ်နှစ်မှ တကြိမ်နှစ်ကြိမ်လေးဖွင့်ပြီး အလုပ်လုပ်ပြတာ လည်းငွေ
ကျန်တဲ့ အပိုင်းကိုတော့ ဥာဏ်ရှိသလို ဆက်တွေးနိုင်ပါကြောင်း....
Posted by ZOLZOL at 10:15 PM